Twinkly Dots, ilay tady LED vaovao mora levona tanteraka | iPhone News
Twinkly Dots, ilay tady LED vaovao mora azo
louis padilla | 15/04/2022 13:54 | HomeKit, maro
Manadihady ny strip LED Twinkly vaovao izahay, miaraka amin'ny a 10 metatra ny halavany, loko RGB, mifanaraka amin'ny HomeKit, Alexa sy Google Assistant ary fahafaha-manao tanteraka hifanaraka amin'ny endrika rehetra azonao eritreretina.
1 Tady LED tsy mitovy amin'ny zavatra fantatsika
3 Fametrahana sy fikirakirana
4 Effects, endrika ary animation
Tady LED tsy mitovy amin'ny zavatra fantatsika
Betsaka ny tady LED, na dia mametra ny fikarohana aza isika amin'ny alàlan'ny fampidirana mifanaraka amin'ny rafitra automatique an-trano toy ny HomeKit, Alexa na Google Assistant. Raha ampiana isika fa afaka mampiseho loko samy hafa amin'ny fotoana iray izy ireo dia efa tery kely ny valiny, fa raha ampiana ny halavan`ny 10 metatra sy ny rafitra malefaka tanteraka izay mamela anao hamorona na inona na inona endrika ary mampifanaraka amin'ny fampiasana rehetra, na an-trano na any ivelany, ny hany vokatra hiseho dia ny Twinkly Dots vaovao.
Miaraka amin'ny traikefa an-taonany amin'ny jiro haingon-trano, mazava ny fanoloran-tenan'i Twinkly: ampio mifanentana amin'ny mpanampy virtoaly rehetra, ao anatin'izany ilay iarahanay eto, HomeKit, ary ampiasao ny rafitra scanning mahomby sy tokana amin'ny alàlan'ny fakantsarin'ny iPhone mba hamantarana ny endrika ananantsika. noforonina mba hampifanaraka ny endrika sy ny sarimiaina amin'ny endrika noforoninay. Raha ampianay ity fampandehanana tena azo itokisana, fifandraisana WiFi ary fampiharana voarafitra tsara Miaraka amin'ny safidy fanamafisana maro, ny vokatra dia singa jiro sy haingon-trano izay hampisy fiantraikany manokana amin'ny efitranonao.
Wi-Fi sy Bluetooth fifandraisana
LED 200 sy halavany 10 metatra (modely misy LED 60 sy 3 metatra, LED 400 ary 20 metatra)
Power plug-in (modely 60-LED miaraka amin'ny herin'ny USB)
Cable flexible tanteraka, mangarahara na mainty
Cable herinaratra miaraka amin'ny halavan'ny 2,5 metatra
Fifanarahana HomeKit, Alexa ary Google Assistant
sary mihetsika mozika
Ho an'ny fametrahana ny jiro LED dia afaka "manodina" azy manodidina ny singa rehetra isika, ary raha te hanamboatra azy amin'ny tany fisaka isika, misy stickers mazava kely izay azontsika esorina tsy misy karazana sisa tavela. Maivana be ny tady, ka mahatohitra ny fametrahana azy tsy misy olana. Ny modely nosedrainay tamin'ity famerenana ity dia ilay misy LED 200 ary manana halavany 10 metatra, mba hahafahantsika maka sary an-tsaina izay mety ho endrika ary mamorona azy tsy misy olana. Afaka misafidy ny hijery mivantana ny LED isika toy ny nataoko tamin'ny famakafakana, na mametraka izany mba tsy hahita afa-tsy ny hazavana avoakany, eo ambanin'ny latabatra na ao ambadiky ny fanaka mba hitaratra amin'ny rindrina.
Tena tsotra ny fizotran'ny fanamafisana, ary atao amin'ny alàlan'ny fampiharana Twinkly izay ananantsika ao amin'ny App Store (rohy) ary koa ao amin'ny Google Play (rohy). Rehefa manokatra ny fampiharana dia ho hita ho azy ny LED strip noho ny Bluetooth, ary avy eo, manaraka ny dingana izay tondroin'ny fampiharana, dia homentsika azy ny fidirana amin'ny tambajotra WiFi, izay ho fitaovana hampiasaina amin'izany. fotoana hifehezana azy. Avy amin'ny fampiharana ihany koa dia azontsika ampidirina amin'ny tambajotra automatique an-trano, izay Raha ny momba ny HomeKit dia mitaky fanavaozana firmware izay efa misy ary azonao atao koa izany amin'ny fampiharana.
Ny sarintany maivana dia tena ilaina amin'ny fitaovana jiro Twinkly rehetra ary marika mampiavaka azy amin'ny vokatra hafa mitovy aminy. Amin'ny fampahafantarana anao ny tena endrika noforoninay, dia mifanaraka tsara amin'io endrika io ny sary mihetsika ary mahazo vokatra mahatalanjona izahay. Afaka manao ny sarintany indray mandeha isika, na mijery faritra samihafa mandra-pahazoanao ny sarintany maivana feno, izay atolotra amin'ny tsipika LED raha mbola ity iray ity. Izany dia fomba tena tsotra amin'ny fampiasana ny fakantsarin'ny iPhone.
Effects, endrika ary animation
Rehefa vita ny fomba fametrahana, sarotra kokoa na latsaka arakaraka ny endrika nofidinao, dia afaka manomboka mifehy ny Dots avy amin'ny fampiharana isika, ary noho izany dia manana ny fanaraha-maso mahazatra sy tsy misy ary koa ny hamafiny. Fa ny tsara indrindra amin'ny rehetra dia ny fahafahana mampihatra loko sy sary mihetsika samihafa. Manana am-polony amin'izy ireo avy amin'ny fampiharana izahay, afaka misintona maromaro ao amin'ny jironay izahay, ary mifandimby eo amin'izy ireo, afaka mamorona ny anay mihitsy aza. Ny iray amin'ireo safidy atolotry ny fampiharana dia ny "hanaisotra" ny endrikay manokana, ary hataonay mivantana eo amin'ny efijery iPhone izany, hahita ny valiny amin'ny tsipika LED amin'ny fotoana tena izy.
Ny iray amin'ireo fiasa atolotry ny Twinkly antsika dia ny mety hisian'izany mandeha amin'ny gadon'ny mozika henointsika ny animation. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy misafidy endrika mifanaraka amin'io fiasa io aloha isika, ary avy eo dia ampiasao ny mikrofon'ny iPhone-ntsika, izay ho ilay mihaino mozika, mamindra ny gadona amin'ny jiro, izay handihy amin'ny gadona. ny mozika. Twinkly dia manolotra fanampim-panazavana azo atao izay ahafahanao manao izany tsy misy idiran'ny iPhone-nao, antsoina hoe Twinkly Music, izay mitentina manodidina ny €30 (rohy).
Ny fampidirana miaraka amin'ny HomeKit dia avy amin'ny tanan'ny fanavaozana firmware izay azo antoka fa tsy maintsy ampiharinao raha vantany vao manamboatra Twinkly Dots amin'ny fampiharana Twinkly ianao. Azonao atao aza ny misintona ny kaody QR fanamafisana, saingy tsy mila mampiasa azy ianao satria avy amin'ny rindranasan'ny mpanamboatra dia ampidirina ho azy ao amin'ny fampiharana an-tranonao. Inona no atolotry ny fampidirana amin'ny HomeKit antsika? Fampidirana amin'ireo fitaovana rehetra nampianay, na inona na inona marika, tontolo iainana ary automation, ankoatra ny fahafahana mampiasa Siri amin'ny iPhone, iPad, HomePod ary Apple Watch hifehy azy.
Na izany aza, toy ny fitaovana rehetra amin'ity karazana ity, tsy ho afaka hanamboatra loko amin'ny matoanteny isika, na hametraka ny animation. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy mampiasa ny fampiharana ofisialy foana isika. Fotoana izao ho an'ny HomeKit hanampiana ity karazana fiasa ity satria ny app Casa dia tena fohy amin'io lafiny io.
Twinkly Dots dia tady LED tena maro be noho ny halavany, ny fahaizany mampifanaraka amin'ny rafitra na ny endrika rehetra, ary ny safidy tsy tambo isaina atolotry ny fampiharana Twinkly. Miaraka amin'ny kalitaon'ny fitaovana izay mampiavaka ny mpanamboatra sy ny rafitra sarintany maivana mahagaga izay ahafahantsika mampifanaraka ny sary mihetsika amin'ny endrika noforoninay, ity strip LED ity dia tsy manan-tsahala amin'izao fotoana izao. Ny vidiny dia € 165, ary na dia tsy azo vidiana amin'ny Amazon amin'izao fotoana izao aza dia misy fivarotana an-tserasera hafa mivarotra azy ary afaka mahita azy ireo ao amin'ny tranokala Twinkly (rohy).
Navoaka tamin'ny: 15 Aprily 2022
Fanovana farany: 15 Aprily 2022
Modely isan-karazany amin'ny halavany samihafa
Loko maromaro indray mandeha
Fandrindrana sy sary mihetsika maro
App Twinkly misy safidy maro
Endri-javatra voafetra ao amin'ny fampiharana Home
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » Twinkly Dots, ilay tady LED vaovao mora azo
Ahoana ny fidirana amin'ny beta public 1Password 8 amin'ny iPhone na iPad-nao
Ny fanavaozana 1Password 8 mahavariana dia azo alaina amin'ny beta ho an'ny daholobe